» गायक मिलन लामाको उदाहरणीय काम, गाउँ बनाए उज्यालो
गायक मिलन लामाको उदाहरणीय काम, गाउँ बनाए उज्यालो
२० बैशाख २०७६, शुक्रबार २१:३१
मकवानपुर, २० बैशाख । चर्चित लोकदोहोरी गायक मिलन लामाले आफ्नै गाउँमा सडक बत्ती जडान गरेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । लोक दोहोरी गीतसँगीतका क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल लामाले आफ्नो जन्मभूमि चितवन जिल्लाको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर ९ मोहनामा आफ्नै खर्चले ६ वटा स्ट्रीट लाईट जडान गरेका हुन् ।
गाउँको सडकमा उज्यालो हुनेगरी उनले नगद २५ हजार खर्च गरेर सडक बत्ती जडान गरेका हुन् । जग्गा बेचेको थोरै पैसा गाउँको लागि लगानी गरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भिडियो सन्देश समेत छाडेका छन् । सामन्य भोज भतेरमा खर्च हुने रकमले समाजको परिवर्तन हुनसक्ने उनले भिडियो सन्देशमा भनेका छन् । ‘२५ हजारले त गाउँ उज्यालो हुँदोरहेछ, अब सोच्नुस् ५० हजारले कति होला ? एक लाखले कति होला ? उनले भने ।
यसअघि समेत टोपी अभियान लगायतका सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्चामा आएका गायक मिलन लामाका विभिन्न गीतहरु चर्चामा छन् । उनी लोकदोहोरीमा नेपालको मौलिकपन र प्राकृतिक सुन्दरतालाई उतार्न खप्पिस पनि छन् । उनका लालुपाते फुल छैन, गलकोटे साँईलो, घरमा पराल बारीमा बोन्सो, दाङ घोराही, हङकङ आईडीले, मेड ईन नेपाल लगायतका बहुचर्चित गीतहरु बजारमा आएका छन् ।